विश्वका १ सय ५० मुलुकलाई साइकलबाटै पाँच पटक फन्को मारेका विश्व किर्तीमानी साइकलयात्री पुस्कर शाह अष्ट्रेलियामा भाँडा टल्काउँदै ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»विश्वका १ सय ५० मुलुकलाई साइकलबाटै पाँच पटक फन्को मारेका विश्व किर्तीमानी साइकलयात्री पुस्कर शाह अष्ट्रेलियामा भाँडा टल्काउँदै !
विश्वका १ सय ५० मुलुकलाई साइकलबाटै पाँच पटक फन्को मारेका विश्व किर्तीमानी साइकलयात्री पुस्कर शाह अष्ट्रेलियामा भाँडा टल्काउँदै !
By रिता घिसिंग on २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०४:४३ समाचार
भदौ २९, काठमाडौँ : विश्वका १ सय ५० मुलुकलाई साइकलबाटै पाँच पटक फन्को मारेका विश्व किर्तीमानी साइकल यात्री पुस्कर शाह यतिबेला कहाँ के गर्दैछन् ? यो सबैको चासोको प्रश्न हो। उनी केही समययता गुमनाम जस्तै छन्। तर, उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो वर्तमानलाई सार्वजनिक गरेका छन्। एउटा यथार्थलाई व्यङग्य शैलीमा पुष्पकरले मार्मिक कथा सार्वजनिक गरेका हुन्। यो कथाका साथमा उनले केही तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। हेर्नुहोस उनको फेसबुक स्टेटस जस्ताको तस्तै :
” ए पुस्करजीलाई त म चिनीहाल्छु नि” सम्माननीयले गर्ब साथ बोल्नु भो !
साइकलको पांग्रा माथि जीवन र मेरो देशको झन्डा बोकेर
” त्यत्रो ४६ सालको योद्धा , जिउदो शहिद, ऐलेसम्म पार्टीसदस्यता लिनु भाको छैन ? ” घर फर्केको साँझ स्वकीय सचिबले मलाई फोनमा सोधे ! उनलाई म ४६ सालदेखि नै नजिकबाट चिन्छु ! उनै हुन् मलाई गुच्चा र गुलेली बोकाएर जन आन्दोलनमा होमिन सिकाउने !